Latest - Juneli Daily
JD — May 24, 2022 add comment
काठमाडौँ — सरकारले गणतन्त्र दिवस ३ दिन मनाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको गणतन्त्र दिवस–०७९ मुल समारोह समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा बसेको मूल...	Read more »
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेलपछि आएको परिणामबाट सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरू हौसिएका छन्। उनीहरू आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि तालमेलसहित अघि बढ्ने तयारीमा छन् । गत ३०...	Read more »
JD — May 23, 2022 add comment
पोखरा महानगरको मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार धनराज आचार्य जित नजिक पुगेका छन्। अहिले सम्मको मत परिणाम अनुसार आचार्यले ४ हजार ४३६ मतको अग्रता लिएका छन्। पोखरामा कुल खसेको मत १ लाख...	Read more »
चितवन – चितवनकाे भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालको फराकिलो मतान्तर कायमै छ । ताजा मत परिणामअनुसार दाहाल ११ हजार तीन सय ७२ मतले नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ । दाहालले...	Read more »
काठमाडौँमा मतगणना जारी रहेको ४ वटा वडामा पछि परे बालेन !
काठमाडौं महानगरपालिकाको मत गणना जारी छ। अहिले ९ वटा वडाको मत गणना जारी छ। वडा ९, १०, १३, १४, १५, २०, २१, २२, २६ मा मत गणना भइरहेको छ। जारी मत गणनामा...	Read more »
समाजवादी र माओवादीले एक सिट ल्याए वृन्दावन जान्छु भनेका दुर्गा प्रसाईले सम्पति त्याग्दै ?
गत ३० वैशाखको निर्वाचन अगाडि भक्तपुरको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रसाईंले स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको पार्टीले एउटा पनि सिट जिते पुरै...	Read more »
काठमाडौँको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह विजयी !
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकामा मतगणना जारी छ । अहिलेसम्म एक लाख २८ हजार ४८५ मतगणना गरिएको छ । पछिल्लो गणनाअनुसार प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उमेदवार बालेन्द्र साह (बालेन)को अग्रता थप...	Read more »
भरतपुरमा एकाएक भुँईकटहरले पिट्यो तहल्का , सबै परे अचम्मित !
काठमाडौं । भरतपुर महानगरको मेयर पदकी माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेनु दाहालले ४० हजार ५८९ मत प्राप्त गरेकी छन् । पछिल्लो मत परिणाम अनुसार उनले अग्रता कायम गर्ने क्रममा सो मत प्राप्त गरेकी हुन्...	Read more »
तिन दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय !
JD — May 22, 2022 add comment
राजनीति एकाएक युटर्न , संघीय चुनावका लागि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री !
काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ। यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। दोस्रोमा एमाले र तेस्रोमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको पूरा परिणाम नआउँदै सत्ता...	Read more »